China Toyota Car Parts ukumiswa bushing for leaf spring Ukwakha kanye Factory | Jiachuang
IToyota Car Parts ukumiswa bushing kwentwasahlobo yeqabunga
UKULINGANISA (mm) (Ukuphakama * OD * ID)
Insimbi ye-NR + 35 #
Singakhiqiza uhla olugcwele lwe-bushings, ithusi bushing, ithusi bushing, iron bushing (10 # tube edwetshiwe), biametal bushing (20 # steel + QSn6.5-0.1), bushing esiyinhlanganisela (NR + 35 # steel), Polyoxymethylene bushing , Inayiloni bushing.
Ukulawulwa kwekhwalithi ephezulu yemikhiqizo yethu ngomugqa wokukhiqiza osezingeni eliphakeme, sisesimweni esihle hhayi nje ukukunikeza ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana, kepha futhi nenhle kakhulu ngemuva kwensizakalo yokuthengisa, onjiniyela abaqeqeshwe kahle bazokunikeza noma iziphi izesekeli zobuchwepheshe.
Sithole isitifiketi se-ISO9001, umkhiqizo wethu uzuze izimpendulo ezivela kumakhasimende ethu.
Ama-oda wesivivinyo amancane angamukelwa, isampula liyatholakala.
Sizohlinzeka ngemidwebo yezobuchwepheshe kumakhasimende ukuze ahlole yonke imininingwane, Sinesigaba sokuhlola ikhwalithi esezingeni elizohlola umkhiqizo ngamunye ngaphambi kokuthunyelwa futhi sinikeze umbiko wokuhlola kwikhasimende. Futhi singasiza amakhasimende ahlele zonke izindaba zokulethwa kwempahla.
Q1: Kuthiwani nge-MOQ ye-Bushing?
A: 500pcs ngayinye.
Q2: Kuzoze kube nini isikhathi sakho sokulethwa?
A: 10-30days lapho uthole idiphozi
Q3: Yimiphi imigomo yokukhokha eyamukelekayo?
Q4: Kuyini ukupakisha?
A: Ukupakisha kwangaphakathi: 1pc / isikhwama sepulasitiki, ukupakisha kwangaphandle: Standard palural + pallet yokhuni, noma ukupakisha ngemfuneko yakho.
Langaphambilini Ukumiswa kweMITSUBISHI Rubber Bushing 2913NA-010
Olandelayo: IToyota Suspension NR Bushing 12362-11300B
U-Ansi Transformer Bushing
I-China Copper Alloy Bushing
Lawula i-Arm Bushing
Kwenziwe ngentando Bronze Bushing
Ukwenza ngezifiso Bushing
I-Din Transformer Bushing
En I-Transformer Bushing
Emuva kweLeaf Leaf Spring Bushings
Esishelelayo Bearing Bushing
I-Solid Leaf Spring Bushings
IToyota Suspension Bushing
I-Trailer Leaf Spring Bushings
Siphakela iToyota Suspension Composite Bushing
Izingxenye zeNISSAN Car Car Control Arm Bushing 55110-JG000
Ikhwalithi ephezulu yeToyota Suspension Rubber Bushing
Izingxenye zezimoto ze-MAZDA Rubber Steel Bushing
Ukumiswa kweMITSUBISHI Rubber Bushing 2913NA-010
Ukumiswa kwe-ISUZU Car Parts Bushing 8-94408841 TFR